DTL-4 andiana Shear Bolt mpampifandray
Izy io dia ampiasaina hampifandraisina ireo mpitarika sy ireo teboka mampifandray amin'ireo tsipika fizarana miaraka amin'ireo tanjaka 35KV na ambany ho an'ireo fantsom-pivoarana varahina-alimina misy fitaovana elektrika misy tontonana; mpampita hafatra azo ampiharina: conducteur aliminioma sy aliminioma.
Mety amin'ny tariby alimo alimina aluminum alimina sy fitaovana elektrika misy tanjaka 1KV ary ambanin'ny fifandraisana tetezamita terminal Copper
vatana: firaka aliminioma mahery ary Cu≥99.9%
Bolt: firaka varahina na alimo
Fitsaboana tarehy: pickling
Ny mpampifandray mekanika BSM sy ny tanany fanamboarana dia natao hampiasaina amin'ny kojakoja misy tariby malefaka hatramin'ny 42 kV. Izy ireo koa dia azo ampiasaina amin'ny laharana l kV, manarona ny halehiben'ny mpampita avy amin'ny 10mm² ka hatramin'ny 1500 mm².
Ny mpampifandray BSM dia misy vatana vita amin'ny vifotsy, lohan'ny volo ary fidirana ho an'ny haben'ny fitarihana kely.
Vita amin'ny alimina alimina manokana matanjaka, ireo kofehy mifamatotra ireo dia lohan-dambam-bolo misy lohany hexagon. Ireo bolt dia tsaboina amin'ny mpandraharaha mihosotra be. Tsy azo ovaina ny bolt fifandraisana rehefa voaharatra ny lohany. Ny vatan'ny lug dia vita amin'ny alimina alimina matevina avo lenta. Ny atin'ny faritry ny lohan'ny conducteur dia voahidy.